संक्रमणबाट जोगाउन साईराम डेण्टलमा ‘ रबर ड्याम ’को प्रयोगबाट दाँतको उपचार – Sarokar online
संक्रमणबाट जोगाउन साईराम डेण्टलमा ‘ रबर ड्याम ’को प्रयोगबाट दाँतको उपचार
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २७, २०७७ | १६:३२:५०
भरतपुर चितवन : संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन साईराम डेण्टलले ‘रबर ड्याम’को प्रयोगबाट दाँतको उपचार सुरु गरेको छ । थालेको छ । कोभिड १९ को संक्रमण महामारी देखिएपछि जोखिम न्यूनिकरणमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग थालेको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र विरामीमा आपसबाट संक्रमण नहोस भन्ने उदेश्यले रबर ड्याम प्रयोग गरेर उपचार सुरु गरिएको हो । साई राम डेण्टल केयर प्रालिले सहिदचोक , अस्पताल रोड र टाँडीमा रहेको आफ्नो शाखाहरुबाट सेवा सुरु गरेको हो । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिक तथा सरल र सहज तरिकाबाट दन्त उपचार गरिरहेको साइ राम डेण्टलले जनाएको छ ।
दाँत रोगको उपचार चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । संक्रमणबाट जोगाएर दाँतको उपचारको विधि साइरामले डेण्टलले पहिलो पटक सेवा सुरु गरेको हो । हालका लागी अति अत्यावश्यक अवस्थाका विरामीको मात्रै उपचार गरिएको जनाएको छ । ‘ दाँतको उपचारहरू गर्दा संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उदेश्यले रबर ड्यामको प्रयोग गरेको साइराम डेण्टलकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सरु थापाले बताईन । ‘ विरामी र चिकित्सकको सुरक्षाको लागी रबर ड्याम प्रयोगबाट उपचार सुरु गरेका छौ ’ उनले भनिन् ‘ यस्को प्रयोगले संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना अत्ति नै कम हुन्छ्र । ’
रबर ड्याम मुख र दाँतको बीचमा राखिने एक प्रकारको बाँध हो । उपचार गर्ने दाँतलाई मात्र लक्षित गर्दछ । विरामीको मुखमा भएका ब्याक्टेरिया अन्यत्र सर्दैन । उपचार गर्नपर्ने दाँत मात्रै देखिन्छ । चिकित्सक र विारमीको प्रत्यक्ष सम्पर्कको जोखिम कम गराउँछ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि साईराम ढेण्टलले अध्ययन गरेर उक्त प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचारलाई सुरक्षित बनाएको बरिष्ठ दन्तरोग चिकित्सक डा. अजय न्यौपानेले बताए । ‘ संक्रमण सर्न सक्ने संभावना कम गरेर दाँतको उपचार कसरी गर्ने भन्ने उपायको खोजी गर्यौ । ’ डा. न्यौपानेले भने ‘ दाँतको रोगले दुख दिएपछि विरामीको चाप बढी भयो , आफु र विरामीको सुरक्षाको लागी नयाँ थालनी गरेका हौ ’ ।
रबर ड्यामको प्रयोगले एकै पटकमा आरसिटि गर्ने विारमीलाई पटक पटक धाउनपर्ने समस्या हटेको सकिने साईराम टेण्टलले जनाएको छ । आरसिटि दाँतको जरा देखि उपचार गर्ने पद्दति हो । ‘ एकै पटकमा उपचार गर्दा निश्चयनै संक्रमणको जोखिम कम हुने भयो ’ डा थापाले भनिन् ।
अष्ट्रेलिया , अमेरिका , युरोपियन मुलुकमा रबर ड्यामको प्रयोग गरिन्छ । ‘ चिकित्सक र विरामीमा संक्रमण सर्ने संभावना अत्यन्त न्यून हुने र विरामीलाई सहज हुन्छ ’ डा न्यौपानेले भने ‘ मुखमा भएका हानीकारक जिवाणु र भाइरसहरुले भएकोले उपचार गर्ने र गरिसकेका दाँतमा भोलीको दिनमा इन्फेक्सन नगर्ने , दाँतको जरैदेखी सफा गर्ने र आरसिटीमा प्रयोग हुने केमिकल र साना औजार मुखबाट खस्नबाट जोगाउँछ । ’ पहिला रुट क्यानल पद्धतीबाट आरसिटि गरिन्थो । अहिले सुरु गरिएको रबर ड्याम प्रविधिले विरामीलाई आरसिटि गर्न पटक पटक आउन नपर्ने भएको छ । दाँतको जरैबाट उपचार गर्ने पद्धती आरसिटि अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको रबर ड्यामको प्रयोगबाट गरेपछि विरामीलाई सहज हुने उनले बताए ।
कोभिडको संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन साइराम डेण्टलले आग्रह गरेको छ । इमर्जेन्सी दन्त उपचारको लागि मात्रै सम्पर्क गर्न साइराम डेण्टलले अनुरोध गरेको छ । लकडाउनको समयमा झण्डै तीन महिना बन्द गरिएको साईराम डेण्टलले असार दश गतेबाट सुचारु गरेको हो । संक्रमणलाई न्यूनिकरणलाई कम गर्न रबर ड्याम प्रयोग गरिएको साइराम डेण्टल केयर प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सरु थापाले बताईन् ।